Control All USB Devices Using Group Policy - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း USB drive ဆိုတာ ရုံးတွေ ကျောင်းတွေက လိုချင်တဲ့ data များကို ကူးယူဖို့၊ မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ ပြန်လည်ကူးထည့်ဖို့ စသည်ဖြင့် အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာများကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အများစုဟာ USB drive များမှ တဆင့်ကူးစက်နေတဲ့ ပြဿနာတော့ရှိနေပါတယ်။ အသုံးဝင်သလို အန္တာရယ်ရှိတဲ့ USB drives များကို ကောင်းမွန်စွာ control လုပ်လိုပါသလား?
Microsoft မှ window vista မှာ Device Installation Restrictions ဆိုပြီး USB drives များကို ထိန်းချူပ် နိုင်စေဖို့ ထည့်သွင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Group Policy ကို အသုံးချပြီး ထိထိရောက်ရောက် ပြုပြင်၊ ထိန်းသိမ်းရတာ လွယ်ကူပေမဲ့ powerful ဖြစ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
ပထမဆုံး installed လုပ်ထားတဲ့ device များ အတွက် USB ID များကို ရှာဖွေရပါမယ်။
၁။ Control Panel မှ Device Manager ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
၂။	Disk drives section မှ installed ပြုလုပ်ထားတဲ့ Devices list ကိုတွေ့ရမှာပါ။
၃။	USB drive ကို right click လုပ်ပြီး properties ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
၄။	USB properties sheet မှ Details tab ကို ရွေးချယ်ပါ။
၅။	Property အောက် dropdown list တွင် Hardware Ids ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
Value မှာ Policy မှာ hardware ID အတွက် အသုံးပြုမဲ့ GUID လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီ USB ID လေးတွေကို create and configure ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Installed ပြုလုပ်ထားတဲ့ device များကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ် နိုင်စေဖို့ အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ရပါဦးမယ်။
၁။ Start button --> Run တွင် gpedit.msc ရိုက်ထည့်ပြီး Ok ပေးပါ။
၂။ Computer Configuration --> Administrative Templates --> System --> Device Installation -->Device Installation Restrictions သို့ရောက်အောင် အဆင့်ဆင့် သွားရောက်ပါ။
၃။ Prevent installation of devices that match any of these hardware IDs ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို Double-click လုပ်လိုက်ပါ။
၄။ Enable radio button ကိုရွေးချယ်ပြီး Show button to open the Show Contents dialog box မှ Add button on the Show Contents dialog box ကို click ပါ။
၅။ Enter the item to be added ဆိုတဲ့နေရာမှာ ID လေးတွေကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီး OK...
ဒါဆိုရင်တော့ Policy set up လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ။ USB Installation ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မှု ပေးနိုင်မလဲ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ကွန်ပျူတာမှာ USB တပ်ဆင်လိုက်ပါ။ USB တပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ GPO မှထိန်းချုပ်ထားကြောင်း warning box လေးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်မပါလာဘူးဆိုရင် တစ်ခါထဲ OK ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
အထက်ပါ ပြုလုပ်ချက်ဟာ installed ပြုလုပ်ပြီးသား deviceများကိုတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် installed လုပ်ပြီးသား device များကိုရော ဘယ်လို ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ အောက်ပါ codes များကို ကူးယူပြီး ADM extension , save as type မှာ All file ကိုရွေးချယ်ပြီး save လိုက်ပါ ( ဥပမာ - example.ADM)
Save ထားတဲ့ ဖိုင်ကို import လုပ်ဖို့အတွက် Administrative Templates တွင် Right-click လုပ်ပြီး Add/Remove Templates --> Add မှတဆင့် ဖိုင်ကို import လုပ်လိုက်ပါ။ GPO သို့ import လုပ်ပြီးသွား ရင်တော့ installed လုပ်ပြီးသား device များကိုလဲ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ကိုဖြိုးငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, ဖူးလေး, နေမင်းမောင်, မောင်ကို, AZM, blackNwhite, g00gle, lusoelay987, peacelover, yawnathan
ပြန်စာ - Control All USB Devices Using Group Policy
အကို....ညီမလေး...device installation ကို မတွေ့ဘူး...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ....computer:xp ပါ
USB drive On & Off လုပ်မယ်
ဒီ text တွေကို ကော်ပီ လုပ်ပြီး နုတ်ပက်ထဲမှာ Paste လိုက်ပါ ပြီးရင် AutoplayOn.reg နှင့်သိမ်းပါ
2. ဒီ text တွေကို ကော်ပီ လုပ်ပြီး နုတ်ပက်ထဲမှာ Paste လိုက်ပါ ပြီးရင် AutoplayOff.reg နှင့်သိမ်းပါ
ကိုယ်အပြင်ထွက်ရင် Off လုပ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်
hardware, how to, usb
Group Policy ကိုပိတ်ထားရင် akm ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 16 17-12-2011 12:20 AM
Group Policy မှ adiministrator နာမည်ပြောင်းနည်း မင်းကိုထွေး ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 1 10-09-2009 08:35 PM
Group Policy နဲ့Registry နှစ်ခုလုံး ပိတ်ထားတဲ့အခါ akm ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 13 22-05-2009 03:07 PM
Group Policy မှ taskbar ကို lock ချနည်း မင်းကိုထွေး ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ214-08-2008 06:29 PM